Tababare Solskjær oo ka hadlay kaalinta Ferguson ee dib u soo kabashada Manchester United - Halbeeg News
Solskjaer oo ammaanay saameynta Ferguson (Xuquuqda Sawirka waxaa leh: AFP / Getty Images)
Macalinka ku meel gaarka ah kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay wararka ku aadan in tababaraha halyayga ah ee Sir Alex Ferguson uu ku lug leeyahay go’aamadiisa tan iyo markii uu qabtay shaqada tababarka ee Red Devils.
Tababaraha u dhashay dalka Norway ayaa ku guuleystay dhammaan 7-dii ciyaarood ee leylinayay tan iyo markii uu xilka kala waregay tababarihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho.
Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England wuxuu kaga hadlay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo tababarihiisii hor ee Alex Ferguson.
Tababarahan ku meel gaarka ayaa ku adkeysanaya inuusan wax badan xittaa la hadlin tababarihii hore ee kooxda. “Wuxuu mar nagu soo booqday tababarka kooxda, marna wuxuu u yimid inuu la kulmo Giuseppe Rossi” ayuu yiri Solskjær isagoo hadalkiisii sii watana waxa uu intaasi raaciyay “Waxaan u maleynayaa inuu saameyn igu yeeshay muddo dhan 15 sano ah oo aan ciyaaryahan ahaa xiligii hogaamintiisa”.